အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကုိ မ်က္ခုံးလွဳပ္သြားေစခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ႔စစ္အင္အားအေျခအေန - APANNPYAY
Home / ျပည္တြင္းသတင္း / ႏိုင္​ငံတကာသတင္း / အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကုိ မ်က္ခုံးလွဳပ္သြားေစခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ႔စစ္အင္အားအေျခအေန
အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကုိ မ်က္ခုံးလွဳပ္သြားေစခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ႔စစ္အင္အားအေျခအေန
Apann Pyay 4:23 PM ျပည္တြင္းသတင္း , ႏိုင္​ငံတကာသတင္း Edit
(စစ္တပ္ရွိေသာကမာၻ႔နိုင္ငံ ၁၂၆ နိုင္ငံအား ၂၀၁၅ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္းေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)
ၿမန္မာ - 44
ယိုးဒယား - 20
ၿမန္မာ - 55,746,253
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 166,280,712
ယိုးဒယား - 67,741,401
ၿမန္မာ - 1,028,866
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 3,300,000
ယိုးဒယား - 1,043,204
ၿမန္မာ - 406,000
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 400,000
ယိုးဒယား - 306,000
*** စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းဠ္ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဗီယက္နမ္ျပီးလ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ထို႕ျပင္ ျမန္မာ့စစ္သည္မ်ားသည္ နွစ္ ၆၀ ၾကာတိုက္ပြဲမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းသာလြန္ထက္ျမက္သည္***
(စစ်တပ်ရှိသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၂၆ နိုင်ငံအား ၂၀၁၅ နှစ်ဦးပိုင်းတွင်းကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းမှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်)
မြန်မာ - 44
မြန်မာ - 55,746,253
ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် - 166,280,712
မြန်မာ - 1,028,866
ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် - 3,300,000
မြန်မာ - 406,000
ဘင်္ဂလားဒေ.ရှ် - 400,000
*** စစ်သည် တစ်ဦးချင်းအရည်အချင်းဠ်မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဗီယက်နမ်ပြီးလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ထို့ပြင် မြန်မာ့စစ်သည်များသည် နှစ် ၆၀ ကြာတိုက်ပွဲများ၏ အတွေ့အကြုံကြောင့် အရည်အချင်းသာလွန်ထက်မြက်သည်***
ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ရွိ T 72 တင္.ကား
M - 569
T - 722
*** ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာပဲ တပ္မေတာ္ ရဲ့သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ ေခတ္မီတိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို စတင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ျပည္ပ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြရဲ ့အဆိုအရ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ-
Type-63 အေပါ့စား တင့္ ၁၅၀ စီး + ….. ( တရုတ္ )***
*** ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းမှာပဲ တပ်မတော် ရဲ့သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ ့တွေဟာ ခေတ်မီတိုက်ခိုက်ရေး သံချပ်ကာယာဉ်တွေကို စတင် လက်ခံရရှိပါတယ်။ ပြည်ပ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေရဲ ့အဆိုအရ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် အတွင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် ဟာ-
T-72S ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ၁၃၉ စီး …. ( ယူကရိန်း ၊ ရုရှား )
Type-59D ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ၂၈၀ စီး + …. ( တရုတ် )
Type-69 II ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ၁၉၀ စီး + … ( တရုတ် )
Type-80 ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ( ×× ) စီး ( တရုတ် )
Type-85 ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ( ×× ) စီး ( တရုတ် )
T-55 ပင်မ တိုက်ပွဲဝင် တင့် ( ×× ) စီး ( အိန္ဒိယ )
Type-63 အပေါ့စား တင့် ၁၅၀ စီး + ….. ( တရုတ် )***
*** BTR-3U IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ၁၀၀၀ စီး + ….
( ယူကရိန္း ႏွင့္ ဖက္စပ္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ )Type-85 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၅၀ စီး …. ( တရုတ္ )
တို ့ကို လက္ခံ ရရွိခဲ ့တယ္လို့ဆိုပါတယ္...။ Light Tank မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ယာဥ္မ်ားလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိုျပည္တြင္းထုတ္လုပ္နိုင္သည္***
(ယာဥ္တင္ သို႕ ပစ္စင္ျဖင့္ ျပစ္ရေသာ ပဲ့ထိန္း ေျမျပင္ ေဝဟင္ ပစ္လက္နက္မ်ား)
( ျမန္မာနိုင္ငံ၏ airdefence system မွာေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္အေကာင္းဆံုးဟုုေျပာနိုင္သည္ )
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ ့ဆိုလို့မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ အနီးမွာ ထားရွိတဲ့တပ္ခြဲတစ္ခြဲ သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီ တပ္ခြဲဟာလဲ ၄၀ မမ ဘိုဖာ အေျမာက္၊ ၃.၇ မမ MK3A ယာဥ္ဆြဲ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ နဲ ့၂၀ မမ M 38 ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ျပီး အနိမ့္ပ်ံလာတဲ့ေလယာဥ္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုသာ တိုက္ခိုက္နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ့၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ခြဲေလးဟာ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါျပီ..။
*** BTR-3U IFV သံချပ်ကာ တိုက်ယာဉ် ၁၀ဝ၀ စီး + ….
( ယူကရိန်း နှင့် ဖက်စပ် ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည် )Type-85 APC သံချပ်ကာ လူသယ်ယာဉ် ၂၅၀ စီး …. ( တရုတ် )
Type-90 APC သံချပ်ကာ လူသယ်ယာဉ် ၂၄၀ စီး …. ( တရုတ် )
EE-9 Cascavel AFV သံချပ်ကာတိုက်ယာဉ် ၁၄၀ စီး … ( ဘရာဇီး )
AML-90 Armoured Cars ( ×× ) စီး … ( တောင်အာဖရိက )
72 MAV -1 IFV သံချပ်ကာ တိုက်ယာဉ် ( ×× ) ( ပြည်တွင်းထုတ် ) ...
တို ့ကို လက်ခံ ရရှိခဲ ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်...။ Light Tank များတွင် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ယာဉ်များလည်းပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အချို့ကိုပြည်တွင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်***
(ယာဉ်တင် သို့ ပစ်စင်ဖြင့် ပြစ်ရသော ပဲ့ထိန်း မြေပြင် ဝေဟင် ပစ်လက်နက်များ)
( မြန်မာနိုင်ငံ၏ airdefence system မှာဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင်အကောင်းဆုံးဟုပြောနိုင်သည် )
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်က မြန်မာ့တပ်မတော် ဟာ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ ့ဆိုလို့မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ် အနီးမှာ ထားရှိတဲ့တပ်ခွဲတစ်ခွဲ သာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီ တပ်ခွဲဟာလဲ ၄၀ မမ ဘိုဖာ အမြောက်၊ ၃.၇ မမ MK3A ယာဉ်ဆွဲ လေယာဉ်ပစ် အမြောက် နဲ ့၂၀ မမ M 38 လေယာဉ်ပစ်အမြောက်အနည်းငယ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အနိမ့်ပျံလာတဲ့လေယာဉ်တစ်ချို ့ကိုသာ တိုက်ခိုက်နိူင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြန်ပြောရင်တော့ မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ ့၁၉၈၈ ခုနှစ်က လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး တပ်ခွဲလေးဟာ စစ်သမိုင်း ပြတိုက်ကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ..။
￼လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရုံး ရဲ ့ကြပ္ကဲမွဳေအာက္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဇုန္ၾကီး ၆ခု ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ နဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ျဖစ္ေနပါျပီ..။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး စတင္၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ လက္နက္ဟာ စကာၤပူနိူင္ငံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ယူေက နိူင္ငံထုတ္ Blood Hound MK2ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ Janes ကာကြယ္ေရး စာေစာင္ရဲ ့ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ ဘူလ္ေဂးရီးယား နိူင္ငံကေနSA-16 Gimlet ( Igla - 1E ) ပုခုံးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးေတြ အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္..။ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အေမရိကန္ နိူင္ငံလုပ္ Stinger ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ နဲ့အလားသ႑န္တူျပီး အျမင့္မီတာ ၃၅၀၀ က ပ်ံသန္းလာတဲ့ေလယာဥ္ကို မီတာ ၅၂၀၀ အကြာအေ၀းကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။
￼လက်ရှိ တပ်မတော် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ ့ဟာ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး အရာရှိချုပ်ရုံး ရဲ ့ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဇုန်ကြီး ၆ခု လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းပေါင်း ၃၀ ကျော် နဲ ့ဖွဲ ့စည်းထားပြီး ဖြစ်နေပါပြီ..။ တပ်မတော် အစိုးရ တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး စတင်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ လက်နက်ဟာ စင်္ကာပူနိူင်ငံမှ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ယူကေ နိူင်ငံထုတ် Blood Hound MK2မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အမြောက်အများ ထပ်မံဝယ်ယူခဲ့တာကတော့ တရုတ်နိူင်ငံလုပ် HN 5A အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး ပုခုံးထမ်း ဒုံးပျံတွေ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီ ဒုံးပျံတွေဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး ပစ်မှတ်ရှာဖွေ စနစ် ပါဝင်ပြီး အမြင့်မီတာ ၃၀ဝ၀ ၊ အကွာအဝေး မီတာ ၃၀ဝ၀ အကွာကို လူ နှစ်ဦးတည်းနဲ့ပစ်ခတ်နိူင်စွမ်းရှိပါတယ်..။
၂၀ဝ၁ ခုနှစ် Janes ကာကွယ်ရေး စာစောင်ရဲ ့ဖော်ပြချက်အရ တပ်မတော်ဟာ ဘူလ်ဂေးရီးယား နိူင်ငံကနေSA-16 Gimlet ( Igla - 1E ) ပုခုံးထမ်း လေယာဉ်ပစ်ဒုံးတွေ အများအပြား ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်..။ဒီ ဒုံးပျံတွေဟာ အမေရိကန် နိူင်ငံလုပ် Stinger ပုခုံးထမ်း ဒုံးပျံတွေ နဲ့အလားသဏ္ဍန်တူပြီး အမြင့်မီတာ ၃၅၀ဝ က ပျံသန်းလာတဲ့လေယာဉ်ကို မီတာ ၅၂၀ဝ အကွာအဝေးကနေ ပစ်ချနိူင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။
ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ မွ Pechora 2M
တစ္ခါ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ယူကရိန္း နိူင္ငံက 36D6 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေရဒါ စနစ္ေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိဳ ့သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ ့အဆိုအရေတာ့ ျမန္မာနိူင္ငံမွာ ရုရွားလုပ္ P37 နဲ ့1L – 117 ေရဒါ အမ်ိဳးအစားေတြကို တပ္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္..။
ရုရွား ရဲ ့လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ့SA – 15 ( Tor M1 ) နဲ ့SA – 17 ( BUK M1 –2) လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ စတင္ရရွိလာပါတယ္...။ ဒီလက္နက္ေတြဟာ ေခတ္မီတာေ၀းပစ္ အျမင့္ပ်ံ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ ေတြ ျဖစ္ျပီး SA – 17 ဟာ အျမင့္မီတာ ၁၅၀၀၀ ကေန ပ်ံသန္းလာတဲ့ပစ္မွတ္ကို၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေနနဲ ့ေခတ္မီ SAM ဒံုးပ်ံ ေတြျဖစ္တဲ ့
SA2,SA-5,SA6,SA 15 ,SA 17 ,SA 18 , SA 19 ႏွင့္ Pechora 2M လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားျပီလို ့သိရပါတယ္..။ ဒါဟာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့၁.၁၀.၁၉၆၆ ကေန ၃၁ ၃.၁၉၆၉ အတြင္း ျမန္မာ့ ေလပိုင္နက္ထဲကို အမ်ိဳးအမည္မသိ ေလယာဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့မွဳကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့သမိုင္းကို ျပည္ဖံုးကား ခ်လိုက္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္...။
၂၀ဝ၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်မံဖြည့်တင်းလာတာကတော့ ရုရှား နဲ့အရှေ ့ဥရောပ နိူင်ငံတွေက လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး လက်နက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီလက်နက်တွေထဲမှာ ရေဒါနဲ့ပစ်ခတ်နိူင်တဲ့Tunguska ( SA – 19 ) လို လက်နက်တွေပါဝင်လာပြီး လက်ရှိ ရုရှား နဲ့အရှေ ့ဥပရောပ နိူင်ငံတွေမှာ ဖြန် ့ချထားတဲ့လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးလက်နက် အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်...။
တစ်ခါ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ ယူကရိန်း နိူင်ငံက 36D6 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ရေဒါ စနစ်တွေ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး တစ်ချို ့သတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ ့အဆိုအရတော့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရုရှားလုပ် P37 နဲ ့1L – 117 ရေဒါ အမျိုးအစားတွေကို တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို ့သိရပါတယ်..။
ရုရှား ရဲ ့လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့SA – 15 ( Tor M1 ) နဲ ့SA – 17 ( BUK M1 –2) လို လက်နက်မျိုးတွေ စတင်ရရှိလာပါတယ်...။ ဒီလက်နက်တွေဟာ ခေတ်မီတာဝေးပစ် အမြင့်ပျံ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးလက်နက် တွေ ဖြစ်ပြီး SA – 17 ဟာ အမြင့်မီတာ ၁၅၀ဝ၀ ကနေ ပျံသန်းလာတဲ့ပစ်မှတ်ကို၄၅ ကီလိုမီတာ အကွာကနေ ပစ်ချနိူင်စွမ်း ရှိပါတယ်..။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ မြန်မာ့ တပ်မတော် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ ့အနေနဲ ့ခေတ်မီ SAM ဒုံးပျံ တွေဖြစ်တဲ ့
SA2,SA-5,SA6,SA 15 ,SA 17 ,SA 18 , SA 19 နှင့် Pechora 2M လို လက်နက်မျိုးတွေ အများအပြား ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလို ့သိရပါတယ်..။ ဒါဟာ အစီရင်ခံစာ တစ်ခုက ဖော်ပြခဲ့တဲ့၁.၁၀.၁၉၆၆ ကနေ ၃၁ ၃.၁၉၆၉ အတွင်း မြန်မာ့ လေပိုင်နက်ထဲကို အမျိုးအမည်မသိ လေယာဉ် ၁၀ဝ ကျော် ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခဲ့မှုကို လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကို ပြည်ဖုံးကား ချလိုက်တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်...။
အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ျပီး ၁၅၅ မမ နဲ့၁၂၂ မမ ေဟာင္၀ဇ္ဇာ အေျမာက္မ်ား အပါအ၀င္ MLRS အတြဲလိုက္ ဒံုးပစ္ စနစ္မ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ့အေျမာက္ ၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားကို စတင္ တပ္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ လာပါတယ္..။ အဲဒီထဲမွာ အစၥေရး ၊ တရုတ္ ၊ ရုရွား နဲ့ေျမာက္ကိုရီးယား နိူင္ငံထုတ္ လက္နက္ေတြ အဓိက ပါ၀င္တယ္လို ့လဲ ဆိုပါတယ္...
အေျမာက္တပ္ဖြဲ့ရဲ ့ေအာက္မွာ ဒံုးတပ္ရင္းမ်ား စတင္ဖြဲ ့စည္းလာျပီး ျပည္ပ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ ့အဆိုအရ ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္တင္းမာမွဳ ျပသနာအျပီး ၂၀၀၃ နဲ့၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ဒီ ဒံုးတပ္ရင္းေတြဟာ တရုတ္နိူင္ငံ လုပ္ M11 တာတိုပစ္ ဒံုးပ်ံ ေတြနဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ Hwasong အမ်ိဳးအစား စကဒ္ဒံုးပ်ံေတြကို အမ်ားအျပား စတင္ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ရဲ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလမွာ Daewoo ေကာ္ပေရးရွင္း နဲ့အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃.၈ သန္းတန္ ဒုံးပ်ံ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္ ကန္ထရုိက္တစ္ခု ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။***
*** ယာဥ္တင္စက္အေျမာက္မ်ား မွာျပည္ပသို႕ပင္ ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္အရည္အေသြးမွီစြာထုတ္လုပ္နိုင္သည္ ယာဥ္တင္ ၁၅၅ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အစီးေလးဆယ္ ဝယ္ယူထား ***
အမြောက်တပ်ဖွဲ ့ဟာ ၁၉၉၀ နှစ်ဦးပိုင်းက စတင်ပြီး ၁၅၅ မမ နဲ့၁၂၂ မမ ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်များ အပါအဝင် MLRS အတွဲလိုက် ဒုံးပစ် စနစ်များ၊ ရာပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့အမြောက် ၊ စိန်ပြောင်းများကို စတင် တပ်ဆင် အဆင့်မြှင့်တင် လာပါတယ်..။ အဲဒီထဲမှာ အစ္စရေး ၊ တရုတ် ၊ ရုရှား နဲ့မြောက်ကိုရီးယား နိူင်ငံထုတ် လက်နက်တွေ အဓိက ပါဝင်တယ်လို ့လဲ ဆိုပါတယ်...
အမြောက်တပ်ဖွဲ့ရဲ ့အောက်မှာ ဒုံးတပ်ရင်းများ စတင်ဖွဲ ့စည်းလာပြီး ပြည်ပ စစ်လက်နက်ဆိုင်ရာ သတင်းရင်းမြစ် တစ်ချို ့ရဲ ့အဆိုအရ ယိုးဒယား-မြန်မာ နယ်စပ်တင်းမာမှု ပြသနာအပြီး ၂၀ဝ၃ နဲ့၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဒီ ဒုံးတပ်ရင်းတွေဟာ တရုတ်နိူင်ငံ လုပ် M11 တာတိုပစ် ဒုံးပျံ တွေနဲ ့မြောက်ကိုရီးယားလုပ် Hwasong အမျိုးအစား စကဒ်ဒုံးပျံတွေကို အများအပြား စတင် လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို ့ဆိုပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား သတင်းဌာန ရဲ ့၂၀ဝ၆ ခုနှစ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ တပ်မတော်အစိုးရဟာ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် မေလမှာ Daewoo ကော်ပရေးရှင်း နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၃.၈ သန်းတန် ဒုံးပျံ နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်လက်နက် ကန်ထရိုက်တစ်ခု ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့တယ်လို ့လဲ သိရပါတယ်..။***
*** ယာဉ်တင်စက်အမြောက်များ မှာပြည်ပသို့ပင် ရောင်းချနိုင်အောင်အရည်အသွေးမှီစွာထုတ်လုပ်နိုင်သည် ယာဉ်တင် ၁၅၅ မမ ဟောင်ဝစ်ဇာ အစီးလေးဆယ် ဝယ်ယူထား ***
ျမန္မာ့ေလတပ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ နဲ့၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ေလယာဥ္ နဲ့ရဟတ္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ၁၃၁ စီးေလာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေလတပ္ဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္ဆင္းရဲ ျပီး သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ေထာက္ပံ ့ေရး နဲ ့ၾကည္းတပ္ရဲ ့စစ္ဆင္ေရး တစ္ခ်ိဳ ့ေလာက္ကိုသာ အေထာက္အကူျပဳနိူင္တဲ ့အေနအထားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေလတပ္
ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို ့ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာအတိအက် မသိရေပမယ့္ ၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ မွာပဲ တပ္မေတာ္ေလဟာ F7 2k ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ ၁၀ စီး GAIC FT –7Trainers ေလယာဥ္ ၂စီး PT6အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ကို စတင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိူင္ငံက G4 Super Galab တိုက္ေလယာဥ္ တစ္အုပ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ F7 2K ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါတယ္။
၁၉၉၅ , ၁၉၉၇ နဲ့၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေလ အေနနဲ့ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ေတြ အမ်ားအျပား ဖြဲ ့စည္းထားႏွင့္ ျပီးပါျပီ.. ျပည္ပ စစ္ဖက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြရဲ ့အဆိိုအရ တပ္မေတာ္ေလ ရဲ့ပထမဆံုး ဗံုံးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ A5 ေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ လက္ခံရရွိတယ္လို့ဆိုပါတယ္...။ ၈ ႏွစ္အတြင္းမွာA5 ဗံုးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၃၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ နဲ့၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ K8 အေမာင္းသင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား စတင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္...။ ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာျပီး ကြ်မ္းက်င္ ေလသူရဲေတြ အမ်ားအျပား ရုတ္တရက္လိုအပ္လာတဲ ့
ျပသနာကို ေျဖရွင္းနိူင္ဖို့တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ေလသူရဲ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၅၀ ကို သီးသန့္စတင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္...။ ဒီဗိုလ္ေလာင္းေတြဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္မွာတင္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အသီးသီးကိုသြားေရာက္ သင္ၾကားရျပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းခါနီး အခ်ိန္မွသာ စစ္တကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ပူးေပါင္း ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအရာရွိေတြဟာ
မြန်မာ့လေတပ်ဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် နဲ့၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်က ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့လေယာဉ် နဲ့ရဟတ်ယာဉ် မျိုးစုံ ၁၃၁ စီးလောက်သာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ လေတပ်ဟာ အရွယ်အစားသေးငယ်ဆင်းရဲ ပြီး သယ်ယူပို ့ဆောင်ရေး၊ထောက်ပံ ့ရေး နဲ ့ကြည်းတပ်ရဲ ့စစ်ဆင်ရေး တစ်ချို ့လောက်ကိုသာ အထောက်အကူပြုနိူင်တဲ ့အနေအထားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ လေတပ်
ကို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို ့ဘယ်လိုစာချုပ်တွေ ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာအတိအကျ မသိရပေမယ့် ၁၉၉၀ ဒီဇင်ဘာလ မှာပဲ တပ်မတော်လေဟာ F7 2k ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ် ၁၀ စီး GAIC FT –7Trainers လေယာဉ် ၂စီး PT6အမောင်းသင်လေယာဉ် အစီး ၃၀ ကို စတင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိူင်ငံက G4 Super Galab တိုက်လေယာဉ် တစ်အုပ် ထပ်မံ ရောက်ရှိလာပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ F7 2K လေယာဉ် ၁၂ စီး ထပ်မံရောက်ရှိလာပါတယ်။
၁၉၉၅ , ၁၉၉၇ နဲ့၁၉၉၉ ခုနှစ်တွေမှာ တပ်မတော်လေ အနေနဲ့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေး တိုက်လေယာဉ်အုပ်တွေ အများအပြား ဖွဲ ့စည်းထားနှင့် ပြီးပါပြီ.. ပြည်ပ စစ်ဖက် သတင်းအရင်းအမြစ်တွေရဲ ့အဆိုအရ တပ်မတော်လေ ရဲ့ပထမဆုံး ဗုံံးကြဲ တိုက်လေယာဉ် A5 တွေကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ စတင် လက်ခံရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်...။ ၈ နှစ်အတွင်းမှာA5 ဗုံးကြဲ တိုက်လေယာဉ် ၃၆ စီးကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ နဲ့၁၉၉၉ ခုနှစ်တွေမှာတော့ K8 အမောင်းသင် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေ အများအပြား စတင်ရောက်ရှိလာပါတယ်...။ လေယာဉ်တွေ အများအပြား ရောက်ရှိလာပြီး ကျွမ်းကျင် လေသူရဲတွေ အများအပြား ရုတ်တရက်လိုအပ်လာတဲ ့
ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိူင်ဖို့တပ်မတော် အစိုးရဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် စစ်တက္ကသိုလ် လက်ခံပတ် တစ်ခုတည်းမှာတင် လေသူရဲ ဗိုလ်လောင်း ၂၅၀ ကို သီးသန့်စတင်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်...။ ဒီဗိုလ်လောင်းတွေဟာ စစ်တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်မှာတင် လေယာဉ်မောင်း သင်တန်းကျောင်း အသီးသီးကိုသွားရောက် သင်ကြားရပြီး နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းဆင်းခါနီး အချိန်မှသာ စစ်တက္ကသိုလ်ကို လာရောက်ပူးပေါင်း ကျောင်းဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဆင်းပြီးချိန်မှာတော့ ဒီအရာရှိတွေဟာ
တပ်မတော်လေ ရဲ့အမာခံ လေသူရဲ အုပ်စုတွေ ဖြစ်နေ ပြီးပါပြီ..။ နောက်ထပ် စစ်တက္ကသိုလ် လက်ခံပတ်အချို ့မှာလဲ ဒီအစီအစဉ်အတိုင်း လေသူရဲ့ ဗိုလ်လောင်း အတော်များများကို သီးသန် ့ခေါ်ယူလေ့ကျင့် မွေးထုတ်ခဲ့တယ်လို ့သိရပါတယ်။
၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ေလ ရဲ့ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ေဖာ္ကာေလယာဥ္မ်ား ေနရာမွာအစားထိုးဖို ့စတင္ေရာက္ရွိလာတာ
ကေတာ့ SAC Y8D အမ်ိဳးအစား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ပိုလန္နိူင္ငံက ၀ယ္ယူလိုက္တဲ့PZL W3 Sokol အမ်ိဳးအစား ဘက္စံုသံုး ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီး နဲ့Mi2ရဟတ္ယာဥ္ အစီး ၂၀ ကို လက္ခံရရွိျပီးတဲ ့ေနာက္ ရုရွားနိူင္ငံလုပ္ Mi 17 ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီးလဲ ထပ္မံ အားျဖည့္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္..။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ယိုးဒယား နယ္စပ္ျပသနာ ျဖစ္ျပီးတဲ ့ေနာက္ အလွ်င္အျမန္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေခတ္မီ MiG 29 B ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ပဲ ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ရဲ့ရုရွား ခရီးစဥ္အျပီးမွာ MiG 29 ဂ်က္ေလယာဥ္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။
၁၉၉၀ ကနေ ၂၀ဝ၀ ခုနှစ်အတွင်း တပ်မတော်လေ ရဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဖော်ကာလေယာဉ်များ နေရာမှာအစားထိုးဖို ့စတင်ရောက်ရှိလာတာ
ကတော့ SAC Y8D အမျိုးအစား သယ်ယူပို ့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပိုလန်နိူင်ငံက ဝယ်ယူလိုက်တဲ့PZL W3 Sokol အမျိုးအစား ဘက်စုံသုံး ရဟတ်ယာဉ် ၁၃ စီး နဲ့Mi2ရဟတ်ယာဉ် အစီး ၂၀ ကို လက်ခံရရှိပြီးတဲ ့နောက် ရုရှားနိူင်ငံလုပ် Mi 17 ရဟတ်ယာဉ် ၁၃ စီးလဲ ထပ်မံ အားဖြည့် ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်..။
၂၀ဝ၁ ခုနှစ် ယိုးဒယား နယ်စပ်ပြသနာ ဖြစ်ပြီးတဲ ့နောက် အလျှင်အမြန် ထပ်မံ ရောက်ရှိလာတာကတော့ ခေတ်မီ MiG 29 B ဂျက်တိုက်လေယာဉ် ၁၂ စီး ပဲ ဖြစ်ပြီး ၂၀ဝ၆ ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်အေး ရဲ့ရုရှား ခရီးစဉ်အပြီးမှာ MiG 29 ဂျက်လေယာဉ် အမြောက်အများ ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို ့လဲ သိရပါတယ်..။
ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု အတြင္းမွာပဲ မေကြးေလယာဥ္ကြင္း ၊ ေကာ့ေသာင္း ၊ ျမိတ္ ၊ ထား၀ယ္ နဲ့ေမာ္လျမိဳင္မွာရွိတဲ့ေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ တိုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္မွဳ မ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ ့ရျပီး ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာလဲ စတင္ ဖြံျဖိဳးလာတာကို ေတြ ့ရွိရပါတယ္..။ ျပည္ပ စစ္ဘက္ နည္းပညာ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြ ရဲ ့အဆိုအရ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ နဲ့၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ ေလ ဟာ အေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးစီကိုေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္နိူင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ STOL CH – 701 အမ်ိဳးအစားအေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ ပ်ံသန္းနိူင္ခဲ့တယ္လို ့သိရွိရပါတယ္...။***
ဆယ်စုနှစ် တစ်စု အတွင်းမှာပဲ မကွေးလေယာဉ်ကွင်း ၊ ကော့သောင်း ၊ မြိတ် ၊ ထားဝယ် နဲ့မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့လေယာဉ်ကွင်းတွေကို အဆင့်မြှင့်တင် တိုးချဲ ့တည်ဆောက်မှု များတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကို တွေ ့ရပြီး လေယာဉ်တည်ဆောက်ရေး နည်းပညာလဲ စတင် ဖွံဖြိုးလာတာကို တွေ ့ရှိရပါတယ်..။ ပြည်ပ စစ်ဘက် နည်းပညာ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေ ရဲ ့အဆိုအရ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် နဲ့၂၀ဝ၅ ခုနှစ်တွေမှာ တပ်မတော် လေ ဟာ အပေါ့စားလေယာဉ် တစ်စီးစီကိုအောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်တပ်ဆင်နိူင်ခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်မှာတော့ STOL CH – 701 အမျိုးအစားအပေါ့စားလေယာဉ် တစ်စီးကို အောင်မြင်စွာ တပ်ဆင် ပျံသန်းနိူင်ခဲ့တယ်လို ့သိရှိရပါတယ်...။***
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ျမန္မာ့ ေရတပ္ဟာ ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ ့အင္အားေသးငယ္တဲ့ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာမွာေတာ့အေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားပါျပီ..။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ ေရ ကို ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေရမိုင္ ၃၀ အထိ ေမာင္းႏွင္နိူင္တဲ့PB 90 အမ်ိဳးအစား ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 424 ,UMS 425, UMS 426 ) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။
ဒုတိယထပ္ ေရာက္လာတာကေတာ့ ၅၉ မီတာအရွည္ Hainan အမ်ိဳးအစား Type 037ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္ ဆယ္စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလမွာ ပထမ အသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ေမလ မွာ ေတာ့ ဒုတိယအသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို ့ကိုလက္ခံ ရရွိခဲ့ပါတယ္....။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ
၆၃ မီတာအရွည္ရွိတဲ့Houxin အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ၀ယ္ယူဖို့တရုတ္နိူင္ငံ နဲ့စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္..။ဒီ သေဘၤာေတြကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ့၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေရ က လက္ခံရရွိခဲ ့ျပီး တပ္မေတာ္ေရ ရဲ ့ပထမဆံုး YJ -1 ( C 801 ) သေဘၤာဖ်က္ ပဲ့ထိန္း ခရုစ္ ဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ထားတဲ့စစ္သေဘၤာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္...
၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက မြန်မာ့ ရေတပ်ဟာ ကမ်းခြေစောင့် စစ်ရေယာဉ် အနည်းငယ်ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်တဲ ့အင်အားသေးငယ်တဲ့ ရေတပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နောက်နှစ်အနည်းငယ် အကြာမှာတော့အခြေအနေဟာ အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားပါပြီ..။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ တပ်မတော် ရေ ကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတာကတော့ ရေမိုင် ၃၀ အထိ မောင်းနှင်နိူင်တဲ့PB 90 အမျိုးအစား ကမ်းခြေစောင့် စစ်ရေယာဉ် ( UMS 424 ,UMS 425, UMS 426 ) တွေ ဖြစ်ပါတယ်...။
ဒုတိယထပ် ရောက်လာတာကတော့ ၅၉ မီတာအရှည် Hainan အမျိုးအစား Type 037ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေး စစ်ရေယာဉ် ဆယ်စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန်နဝါရီလမှာ ပထမ အသုတ် စစ်ရေယာဉ် ၆ စီးကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ မေလ မှာ တော့ ဒုတိယအသုတ် စစ်ရေယာဉ် ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို ့ကိုလက်ခံ ရရှိခဲ့ပါတယ်....။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လမှာ တပ်မတော် အစိုးရဟာ
၆၃ မီတာအရှည်ရှိတဲ့Houxin အမျိုးအစား ဒုံးပျံတင် အမြန်သွား စစ်ရေယာဉ် ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ဝယ်ယူဖို့တရုတ်နိူင်ငံ နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်..။ဒီ သင်္ဘောတွေကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ့၁၉၉၇ ခုနှစ်တွေမှာ တပ်မတော်ရေ က လက်ခံရရှိခဲ ့ပြီး တပ်မတော်ရေ ရဲ ့ပထမဆုံး YJ -1 ( C 801 ) သင်္ဘောဖျက် ပဲ့ထိန်း ခရုစ် ဒုံးပျံတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေ ဖြစ်လာပါတယ်...
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရတပ္သေဘာၤက်င္း နဲ ့ျမန္မာ့ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းေတြဟာတရုတ္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ ့ေတြကို အေျမာက္အမ်ား ရရွိလို ့ေနခဲ့ပါျပီ...။ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကေန၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းဟာ ၅၀မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၆စီး ( UMS 551 – UMS 556 ) ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ ၄စီး ( UMS 557 – UMS 560 ) ၂၇ ေပ အရွည္ရွိတဲ ့ျမစ္တြင္း ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၁၄စီး ( ငမန္း ၁ - ငမန္း ၁၄ ) နဲ့အျခားအေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္ အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္...။
ေရတပ္သေဘၤာက်င္း ရဲ့အၾကီးစား သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ပရုိဂရမ္ေတြဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာအင္ျပည့္အားျပည့္ စတင္ပါတယ္...။ ၇၇ မီတာ အရွည္ရွိတဲ့ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 771 – UMS 772 ) ႏွစ္စီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာေတြကိုစတင္ထုတ္လုပ္နိူင္တဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္
လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရ ဟာ ဒုံးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္ နဲ ့ေကာဗက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းေျခေစာင့္ ကင္းလွည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ား မိုင္းရွင္း ေရယာဥ္မ်ားနဲ့သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္ အေျမာက္အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ေခတ္မီ ေရတပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္...။
ဒုံးပျံတင် အမြန်သွားတိုက်ခိုက်ရေး စစ်ရေယာဉ်
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာတော့ တပ်မတော် ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း နဲ ့မြန်မာ့ သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်းတွေဟာတရုတ် နည်းပညာ အထောက်အပံ ့တွေကို အမြောက်အများ ရရှိလို ့နေခဲ့ပါပြီ...။ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကနေ၂၀ဝ၆ ခုနှစ် ကာလအတွင်း မှာတော့ တပ်မတော်ရေတပ် သင်္ဘောကျင်းဟာ ၅၀မီတာ အရှည်ရှိတဲ ့အမြန်ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၆စီး ( UMS 551 – UMS 556 ) ဒုံးပျံတင် အမြန်တိုက်ခိုက်ရေး ရေယာဉ် ၄စီး ( UMS 557 – UMS 560 ) ၂၇ ပေ အရှည်ရှိတဲ ့မြစ်တွင်း ကင်းလှည့်ရေယာဉ် ၁၄စီး ( ငမန်း ၁ - ငမန်း ၁၄ ) နဲ့အခြားအထောက်အကူပြု စစ်ရေယာဉ် အများအပြားကို တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို ့သိရပါတယ်...။
ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း ရဲ့အကြီးစား သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး ပရိုဂရမ်တွေဟာ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်မှာအင်ပြည့်အားပြည့် စတင်ပါတယ်...။ ၇၇ မီတာ အရှည်ရှိတဲ့ကော်ဗက် စစ်ရေယာဉ် ( UMS 771 – UMS 772 ) နှစ်စီးကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀ဝ၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘောတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်နိူင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်
လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ တပ်မတော် ရေ ဟာ ဒုံးပျံတင် ဖရီးဂိတ် နဲ ့ကောဗက် စစ်ရေယာဉ်များ အမြန်တိုက်ခိုက်ရေး ရေယာဉ်များ ကမ်းခြေစောင့် ကင်းလှည့် စစ်ရေယာဉ်များ ကမ်းတက်ရေယာဉ်များ မိုင်းရှင်း ရေယာဉ်များနဲ့သယ်ယူပို ့ဆောင်ရေး ရေယာဉ် အမြောက်အများကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခေတ်မီ ရေတပ် တစ်ခု ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်...။
လက္ရွိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ရဲ႕ စစ္အင္အား ၂၀၁၇ စစ္တမ္းကုိ ဗီဒီယုိဖိုင္မွာ ၾကည္႔ပါ